Advocacy for Oromian iyyannaa nagaa fi araara Oromiyaa dhiheesse – Oromedia
Home » Oduu » Advocacy for Oromian iyyannaa nagaa fi araara Oromiyaa dhiheesse
(Oromedia, 2 January 2019) Advocacy for Oromian mootummaan Itoophiyaa akka ABO waliin marii nagaa fi araaraa gaggeessu gaafate.
Rakkoo waldhabdee kana mariidhaan akka furamu kan gaafate Advocacy for Oromian, marii kana “qopheessuufi keessatti hirmaatee milkeessuuf yeroo kamiyyuu caalaa fedhii fi qophaa’ina guddaa qabna,” jedheera.
Itti dabaluunis, qabxiilee furmaataa kana maaliif akka akeekes hubachiiseera. “mariin nagaa fi araaraa kamiyyuu qaawwaalee jiran mara duuchee uummata Oromoofi Itoophiyaa hunda gara jaalalaa, tokkummaafi misoomaatti akka ceesisu amanna.
Akka jaarmichi eeretti, waliigaltee kanaan dura ABO fi mootummaan irra gahanis keessa deebi’anii haaromsuun barbaachisaa dha. “Waliigalticha deebisanii haaromsuun akka fuulduratti adeemu taasisuu dha.”
Guutummaan ibsa kanaas kunoo ti:
Previous: Pirofesar Asmaroom Laggasaa eenyu?
Next: Jijjiiramni Oromiyaa keessatti dhufaa jiru qabsoo ummata Oromootiin waan argameef kunuunfamuu qaba.